Nzira Yekugadzira Rabhi yeRHCSA? | RHCSA Lab - ITS Tech School
Setup Lab yeRHCSA
Chokutanga, unoda kambani Inoshandiswa Purogiramu yeRHCSA, somuenzaniso, CentOS, Fedora kana RHEL 7 (munyaya ino unoda uhu). Ini ndichakupa uye kukurudzira kuti ushandise CentOS Project sezvo inopa zvikamu zvose se Red Hat Enterprise Linux asi isina ruvimbo rwebhizimisi uye nhengo yeRHN. Kana iwe usingafungi kugara kure na Fedora nokuda kweizvi.
CentOS inogona kuiswa pese pamutambo wehuviri uye huripo.
512Mb ye RAM
A 4GB rakaoma disk
A network network
Iyo yekare yaidiwa ichakubvumira iwe kuti uite kushandiswa kusina basa kweCentOS. Asi, pane imwe nguva yaunoda kutamba imwe neimwe yezvinyorwa zvekuongorora kweRHCSA, zvigadziriswa zvisingakoshi zvinofanira kuva:
64-bit platform yakatsigirwa
1GB ye RAM
Ini ndichakukurudzira kuti uite ma seva matatu akasiyana, anonzi se:
Server 1 inoshongedzwa yeCentOS yeSearch uye Server 2 inoshandiswa apo vashandi vebasa rinobatsira vanofanira kuedzwa. Ivhavha yePIPIPA inotarisirwa kuita mabasa anozivikanwa nekusimbisa uye Network File System (NFS).
Kuti ugadzire labhi, ini ndichakurudzira kuti ushandise mamwe mapeji ekugadzirisa maitiro, semuenzaniso, VMware kana Oracle Virtual Box. Izvi zvinopa zvikamu, somuenzaniso, kutarisa mberi (kukupa simba kuti ubatsire kudzokera kune imwe nguva yakatarwa yekugadzirisa). Iwe unogonawo kujekesa pane hardware chaiye asi hazvisi nyore kugadzirisa.
Ventures yekutamba Bhuku Rekushandisa Kugadzirisa RHCSA LAB
Tora kuiswa kwako DVD kana USB uye boot PC iyo yaunofanira kuisa CentOS.
Iwe uchaona iyo CentOS boot menu: Sarudza Isa CentOS 7
Pane imwe nguva bhutiro rekubva kwauri kutamba kunze kwekugadziriswa rave rakaiswa, iwe uchaona Welcome kuCentOS 7 skrini. Kubva pachinyorwa ichi unogona kusarudza mutauro uye kurongedza zvirongwa sezvinoratidzwa neunogadzira yako.
Pakusarudza kushandiswa kwekushongedza uye marimiro, iwe uchaona rundown skrini yekuisa. Kubva pachinyorwa ichi unosarudza zvirongwa zvose zvaunoda kushandisa. Iyi chinyorwa ine zvimwe zvinomwe zvakasiyana-siyana:
Alternatives Date & Time, Console uye Mutauro Mutsigiri uye yakagadzirirwa mberi zvakare. Sezvaunenge uchibvarura kubva kuMedia Media, kuiswa Souce kunofanira kuva Local Media.
Kubva pakusarudzwa kweSoftware sarudzo, sarudza Server ne GUI mamwe. Uyezve, hapana chikonzero chinokumanikidza kusarudza kuwedzera-kwatingaita sezvatinogona kuvataurira gare gare. (Ive kuva vanhu vashomanana vangati "vatariri vechokwadi vanogadzirisa mutsara asi vanogadzirira RHCSA uye RHCE kuongororwa hakusi nezvekuva mutungamiriri chaiye.)
Parizvino paInstation Destination Destination Sarudzo Ichagadzirira kuparadzanisa. Iva nechokwadi chokuti wakasarudza diski yaunoda kushandisa. (Uyezve, siya zvimwe zvigadzirwa zvekugadzirisa kushandiswa kweVVM.
Kubva pachinhu ichi, tsvagai + kuti uise itsva disk gadgets. Nokugadzirisa mamiriro ezvinhu anodiwa munharaunda iyi, ndinorayira kushandisa sangano iri rakakonzerwa ne disk (muchidimbu che20GB hard disk)
/ boot yakasungirirwa pane XFS yakagadzirwa netsika, chikamu 500MB
A XFS yakarongeka yakaenzana nehukuru hwe 10GB iyo yakasungirirwa pa /
A 1GB inonzwisisa izwi iro rinoshandiswa sechitsinhanisa nzvimbo.
Pamberi kwegadziriro yakagadziriswa kuti iite disk, uchaona svondo rinoratidza rundown yekufambira mberi kwawakabatanidza. Pamusana pekuda kuti zvinhu zvose zvinotarisa zvikuru, bvuma Bvuma kuchinja kuisa sarudzo yako. 10.
Ikokupedzisira imwe chikamu chekuiswa kwepepaiti inokubvumira kuti uise mitambo. Ona kuti unofanira kuronga chimwe chinhu. Muitiko iyo iwe usingaiti chero chinhu, server yako haizove nekwanisi yekubatanidza nemhando ipi neipi yekutengesa. Kubva paIndaneti Summary screen, chengetai Network uye Hostname kuti uise mitambo.
Ikozvino ipai midzi midzi uye User Creation. Kuedza kuisa password yakajeka, somuenzaniso, "understudy".
Mushure mekuiswa, Reboot.
Tora zvakafanana kune Server 2.
Chii chinonzi Red Hat Enterprise Linux (RHEL) | Red Hat Certification